I-TamilRockers (2020) - Ingabe Le Website Entsha Iphephile? Isibuyekezo Sokugcina - Ezokuzijabulisa
Ama-Movie nemibukiso ye-TV yizinsizakusebenza ezijabulisa kakhulu abantu abaningi abazisebenzisayo ukuvuselela izingqondo zabo nokuqeda konke ukucindezeleka nokukhungatheka. Kuyafakazelwa ukuthi izinsizakusebenza zokuzijabulisa ziyindlela engcono yokuthola ukukhululeka ezindabeni ezibucayi ezinjengokuxineka.
Noma nini lapho noma yimuphi umuntu efuna ukuchitha isikhathi sakhe samahhala, ikakhulukazi ukubuka i-movie ethile yokuzijabulisa ukuze ususe isithukuthezi abebhekene naso.I-TamilRockers yiwebhusayithi yesifufula esiza ukuhlinzeka ngokusatshalaliswa okungekho emthethweni kwama-movie, imibukiso, noma amavidiyo ane-copyright.
Iwebhusayithi engekho emthethweni, egqekezayo eneqoqo elikhulu lama-movie wesabelomali esikhulu online. Ngokusho kweminye imithombo, ngaphambi kokukhishwa kwe-movie enkulu yesabelomali, iTamilRockers ihlela ukukhipha i-movie online ngosuku lwayo lokuvula uqobo.
Le webhusayithi ivumela izivakashi ukuthi ziseshe futhi zilande noma yimaphi ama-movie ane-copyright zisebenzisa izixhumanisi zikazibuthe kanye namafayela wesifufula.ENdiya, le webhusayithi iyalelwe ukuthi ivinjelwe. Kepha, noma kunjalo, iwebhusayithi iyaqhubeka nokusebenza ngokumane ishintshele kuhlu lwamakheli ewebhu amasha ukugwema ukubhekana neziphathimandla zikahulumeni.
Ngingawabuka ama-Movie ku-TamilRockers?
Ukumane ubuke noma ulande noma yimaphi ama-movie avela ku-Tamilrockers akukho emthethweni ngokuphelele njengoba le webhusayithi isekela ubugebengu. Uma kwenzeka, ungena kule webhusayithi bese ubanjwa nganoma iyiphi indlela kuzodingeka ukuthi ujeziswe ngokujeziswa kokwephula umthetho owenziwa yizikhulu zikahulumeni.
Futhi, le webhusayithi ithi ayinamalungelo ngokuqukethwe okulayishiwe ukuze abasebenzisi bakubuke noma bakulande. Uma uvakashela lolu hlobo lwewebhusayithi nge-inthanethi imininingwane yakho yangasese ingaba sengozini enkulu. Ngakho-ke, khumbula ukuthi iwebhusayithi enjalo ayikho emthethweni futhi ayiphephile ukulanda ama-movie kuyo.
Ngakho-ke, Uma usebenzisa le webhusayithi ukwenza bukela noma yiluphi uhlobo lwama-movie , kufanele uyigweme ngokuzayo uma kungenjalo ungangena enkingeni ngokwemithetho yaseNdiya.
Ukuphanga kuyicala eliphelele elijeziswayo.
Ngabe amaTamilrockers Kuphephile Ukuwasebenzisa?
Abantu kufanele bazi ukuthi le webhusayithi yaziwa njengesiza esiphangiwe esiphikisana ngokuphelele nokubusa kukahulumeni. Kepha, sibonile ukuthi abantu basavakashela le webhusayithi ngezindlela eziningi, yize ivinjelwe.
Ukusebenzisa le webhusayithi nakanjani akuphephile njengoba le webhusayithi ivinjelwe nguHulumeni waseNdiya.Uma usebenzisa noma iyiphi iwebhu yesifufula
indawo, kuyicala. Futhi, khumbula ukuthi ukusebenzisa amawebhusayithi anjalo kungangena nokugenca kudivayisi yakho.
Uma usebenzisa amawebhusayithi anjalo ungabona ezinye izigelekeqe. Yileyondlela lawa mawebhusayithi angalifaka ngayo igciwane kudivayisi yakho futhi uma idivayisi yakho isithole igciwane ohlelweni lwayo, idivayisi yakho izosebenza kancane kakhulu. Kungalimaza futhi iprosesa le-PC yakho.
Uma uzizwa uthanda ukulanda ama-movie , Okufanele ukwenze nje, vele ufune noma yiziphi izingxenyekazi zomthetho bese ulanda i-movie obukade uyifuna.
Ngabe sivunyelwe ukulanda ama-movie kumaTamilrockers?
Kufanele sazi ukuthi ukusebenzisa amawebhusayithi aphangiwe kuthiwa kuyicala lobugebengu eNdiya. Empeleni, hhayi eNdiya kuphela kodwa nakwamanye amazwe amaningi. Ohulumeni bala mazwe abavumeli abantu ukuba bavakashele izindawo ezinjalo ezigwaziwe.
Uma sikhuluma ngamaTamilrockers, empeleni bekuvinjelwe uhulumeni waseNdiya kaningi. Kepha, bayaqhubeka nokushintsha amagama abo wesizinda futhi baqhubeke nomsebenzi wabo.
Baningi kakhulu abantu abasebenza kanzima ukuqedela ama-movie noma uchungechunge lwe-web abakuzo. Kodwa, uma ngemuva kokukhishwa kwe-movie yabo futhi kamuva idalulwa ezinhlotsheni ezinjalo zamawebhusayithi aphangiwe, kuzobadabukisa kakhulu .
Njengoba sazi manje, ukusebenzisa izinhlobo ezinjalo zamawebhusayithi kuyacasula futhi kuphambene nomthetho njengoba lezi zinhlobo zamawebhusayithi zintshontsha ama-movie bese zikukhonza ngokufanayo. Ngamafuphi, Kusho nokuthi futhi untshontsha okuqukethwe okweqile bese uyakubuka. Kubalulekile ukwazi ukuthi okuqukethwe okutholakala kuwebhusayithi kunamalungelo obunikazi. Ngakho-ke, kungahle kube nethuba lokuthi uhlobo oluthile lwesenzo lungathathwa ngokumelene nawe futhi uma ngabe uphathe okuqukethwe kokuphanga kudivayisi yakho.
Isebenza kanjani le webhusayithi?
Kungenzeka ucabange ukuthi noma ngabe le webhusayithi ivinjelwe uhulumeni, kungenzeka kanjani ukuthi iwebhusayithi isasebenza ngaphandle kwezinkinga. Into ukuthi, iwebhusayithi yeTamilRockers ayisingathi noma yikuphi okuqukethwe okutholakala kuwebhusayithi.
Iwebhusayithi iqondisa abasebenzisi ngezixhumanisi zangaphandle. Ngakho-ke, uzokwazi ukubuka noma yimaphi ama-movie noma amavidiyo avela kuzixhumanisi zangaphandle ngaphandle kwanoma yikuphi ukuphazamiseka.
Yize iwebhusayithi ingalayishi okuqukethwe okweqile, iyasekela futhi ithuthukise okuqukethwe okweqile. Futhi, iwebhusayithi yeTamilRockers iqhubeka nokushintsha ngokuqhubekayo amagama wesizinda sewebhusayithi ukugcina umsebenzi wabo uqhubeka. Ngakho-ke, ngosizo lwalokhu, iwebhusayithi ikude neziphathimandla zikahulumeni ngenxa yezixhumanisi ezahlukahlukene zommeleli.
Kusebentisa emawebusayithi lagwenyiwe kubuka emamuvi noma imibukiso yephiriyadi noma ngawiphi emavidiyo kuphambene nemitsetfo lesemazweni lamanyenti. Uma kwenzeka ubanjwa ubuka ama-movie ngokusebenzisa amawebhusayithi anjalo kungenzeka kube nenkinga ethile kuwe kungekudala. Le ndatshana yenzelwe ukufundisa kuphela futhi sihlela nokuqwashisa abantu ngokubazisa ngokusetshenziswa kwamawebhusayithi aphuthiwe njengoba kungekho emthethweni ukusebenzisa le webhusayithi. Kungaba ngcono kuwe ukuthi ugweme ukusebenzisa amawebhusayithi aphangiwe futhi ubheke amanye amawebhusayithi lapho udinga ukukhokha khona ukuze ulande noma yimaphi ama-movie noma imibukiso.
I-Starfield: Konke odinga ukukwazi kusukela Kudethi Yokukhishwa kwayo, Ukusakaza, kanye Nesakhiwo kuya ku-Trailer yayo!
UNaraka: Bladepoint - Konke Esikwaziyo Kuze kube manje